Zidane ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan xiddigaha Hazard iyo Modrić kahor kulanka Levante – Gool FM
Zidane ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan xiddigaha Hazard iyo Modrić kahor kulanka Levante
(Madrid) 13 Sebt 2019. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan xiddiga reer Belgian Eden Hazard kulanka ay bari la ciyaari doonaan Levante.
Kooxda Real Madrid ayaa bari ku marti galin doonto dhigeeda Levante garoonka Santiago Bernabéu, si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Real Madrid ayaa kula soo saxiixatay Eden Hazard intii lagu jiray suuqa kala iibsiga ee xagaaga qiimo lacageed lagu qiyaasay 100 milyan euro, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Galbeedka magaalada London ee Chelsea.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta wuxuu ku xaqiijiyay inuu Eden Hazard diyaar u yahay kulanka barri ay kula ciyaari doonaan kooxda Levante horyaalka La Liga.
Zinedine Zidane ayaa shirka jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Eden Hazard wuxuu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka bari ee kooxda Levante, laakiin waa inaan si deggan ula shaqeynaa isaga”.
Sidoo kale Zidane ayaa ka hadlay xaalada Luka Modrić oo isniintii uu dhaawac soo gaaray inta uu ku gudi jiray gudashada waajibaadka xulkiisa qaranka Croatia wuxuuna yiri:
“Kama fikiri karno haatan dhaawaca Luka, waxaan rajeynayaa inuu si dhaqso leh u soo kabsan doono, waa inaan aqbalnaa dhaawacyada”.
“Modric ma ciyaari doono kulanka beri, wuxuu ciyaaray 2 kulan seddex maalmood oo uu la joogay xulkiisa qaranka Croatia, taasina waa wax aad u adag”.
Kanu oo kaga digay kooxaha Ingiriiska halista xiddig ka tirsan Arsenal